Ny sandan'ny anjara Apple Inc.
Anisan'ireo Apple Inc. androany, ny vidin'ny AAPL tahiry amin'ny aterineto izao, mizara ny vidin'ny Apple Inc..
Apple Inc. Stock ny vidiny Diary an-tserasera Ny tantaram-piainana Capitalization Dividends Tombony Vola Naoty
AAPL = 159.22 US dolara
-0.47 USD (-0.295%)
Ny fiovan'ny vidin'ny tahiry Apple Inc. in US dolara mitranga isan'andro. Fampahalalana momba ny fifanakalozana ny varotra stock nomena avy amin'ny loharanom-baovao misokatra. Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny fifanakalozana amin'ny tsena crypto samihafa. 1 stock of Apple Inc. dia nalin'ny 0.47 US dolara. Apple Inc. mitotongana nanomboka ny omaly. Ho an'ny tahiry 1 avy amin'ny Apple Inc. izao dia mila omena ny 159.22 stock of US dolara.
Apple Inc. ny lanjan'ny orinasan'ny orinasa US dolara
Herinandro lasa izay, ny vidin'ny Apple Inc. dia azo vidina ho an'ny 162.41 US dolara. Enim-bolana lasa izay, ny Apple Inc. dia azo ovaina amin'ny 145.86 US dolara. Herintaona lasa izay, ny Apple Inc. dia azo amidy amina 134.99 stock of US dolara. Apple Inc. vidin'ny tahiry ao amin'ny US dolara dia azo jerena amin'ny tabilao. -1.96% - fiovana amin'ny tahiry vidin'ny Apple Inc. ao amin'ny US dolara isan-kerinandro. 17.95% - fiovana amin'ny tahiry vidin'ny Apple Inc. ao amin'ny US dolara isan-taona.
Stock quotes Apple Inc. US dolara
AAPL Ny US dolara (USD)
1 AAPL 159.22 US dolara
5 AAPL 796.10 US dolara
10 AAPL 1 592.20 US dolara
25 AAPL 3 980.50 US dolara
50 AAPL 7 961 US dolara
100 AAPL 15 922 US dolara
250 AAPL 39 805 US dolara
500 AAPL 79 610 US dolara
Ankehitriny, 10 stock of Apple Inc. dia azo atakalo ho an'ny 1 592.20 US dolara. Ny fiovam-po an-tsena amin'izao fotoana izao ho an'ny 25 stock of Apple Inc. manome 3 980.50 US dolara. Raha hanova ny 50 stock of Apple Inc., 7 961 US dolara takiana. Androany 15 922 USD = 100 stock of AAPL. Raha manana 39 805 US dolara, dia ao amin'ny ny British Virgin Nosy izy ireo dia azo atakalo ho an'ny 250 stock of Apple Inc.. Ankehitriny, 79 610 US dolara azo vidiana ho an'ny 500 stock of Apple Inc..
AAPL tantara momba ny vidin'ny stock
27/01/2022 159.22 USD -0.47 ↓
26/01/2022 159.69 USD -0.09 ↓
25/01/2022 159.78 USD -1.84 ↓
24/01/2022 161.62 USD -0.79 ↓
21/01/2022 162.41 USD -
Androany ao amin'ny 27 Janoary 2022, 1 stock of Apple Inc. = 159.22 US dolara. 26 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Apple Inc. vidiny 159.69 US dolara. Apple Inc. in US dolara amin'ny 25 Janoary 2022 dia mitovy amin'ny 159.78 US dolara. Ny ambony indrindra Apple Inc. ao amin'ny US dolara ny vidin'ny taham-bolana ho an'ny volana lasa dia ny 21/01/2022. Ny farafahakeliny Apple Inc. ao amin'ny US dolara ny vidin'ny taham-bolana ho an'ny volana lasa dia ny 27/01/2022.
Anisan'ny Apple Inc. ny iray amin'izao fotoana izao amin'ny 159.22 $. Ny vidin'ny AAPL dia niova ho -0.295% na -0.47 USD hatramin'ny andro iraisam-barotra farany. Azonao atao ny mividy entana 100 Apple Inc. amin'ny 15 922 US dolara na mivarotra 50 isa amin'ny AAPL amin'ny 7 961 US dolara.
Apple Inc dia mamolavola, manamboatra sy mampivelatra fifandraisana amin'ny finday sy mediam-pifandraisana ary solosaina manokana, ary mivarotra karazana rindrambaiko, serivisy, accessories, vahaolana amin'ny tambajotra sy ny votoaty sy ny fampiharana.
Anisan'ireo Apple Inc. amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny stock AAPL dia an-tserasera amin'izao fotoana izao.
Vidin'ny AAPL -tserasera
Ny tahirim-bola Apple Inc. dia mitantara ny vidin'ny stock AAPL amin'ny aterineto, AAPL.
Apple Inc. Ny US dolara karama hatramin'ny fanombohan'ny varotra.
Ny habetsahan'ny varotra an'ny AAPL dia mizara androany ary ny tantaran'ny tombom-barotry ny Apple Inc..
Teti-bola Apple Inc.
Daty fandoavam-bola ny dividends amin'ny ampahany AAPL, ny fandaniana dividendan'ny AAPL amin'ny 2022.
Apple Inc. vola isaky ny anjara
Ny vola miditra isan-kerinandro amin'ny orinasa Apple Inc., dia mitatitra momba ny tombom-barotry ny AAPL ho an'ny taona 2022.
Fivarotana Apple Inc.
Tatitra momba ny vokatry ny orinasa Apple Inc., Apple Inc. isan-taona ho an'ny 2022.
Fanamarihan'ny orinasa Apple Inc.
Apple Inc. ao amin'ny sokajin'izao tontolo izao